Jumladda CNC soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha | Saxnimada QY
MAXAA CNC rogmanaya ?
Jeedinta CNC guud ahaan waxay isticmaashaa kombuyuutar ujeedo-guud ah ama ujeedo gaar ah si loo gaaro kantaroolka barnaamijka dhijitaalka ah, sidaa darteed CNC waxaa sidoo kale loo yaqaan Kontoroolka Lambarada Kumbiyuutarka (CNC) ee gaaban.
Habka laysarka CNC waxaa inta badan loo isticmaalaa goynta gudaha iyo dibadda sagxadaha cylindrical ee qaybaha shafka ama qaybaha disc, gudaha iyo dibadda dusha conical xaglo koorta, qaloocin adag gudaha iyo dibadda dusha, dhululubada, iyo dunta koonaha. Waxa kale oo ay samayn kartaa grooving, qodista iyo caajis iwm.
Farsamaynta farsamada dhaqameed waxaa lagu sameeyaa hawlgalka gacanta ee qalabka mashiinka caadiga ah. Inta lagu jiro farsamaynta, qalabka farsamada gacanta ayaa lagu ruxayaa si loo gooyo birta, saxnaanta alaabta waxaa lagu qiyaasaa qalabka sida indhaha iyo calipers. Marka la barbar dhigo weel dhaqameedka, xargaha CNC waxay aad ugu habboon yihiin in loo rogo qaybaha wareegta ee shuruudaha iyo sifooyinka soo socda:
(1) Qaybo leh shuruudo sax ah oo sarreeya
Sababtoo ah adkeynta sare ee lathe CNC, saxnaanta sare ee wax soo saarka iyo dejinta qalabka, iyo ku haboon oo sax ah magdhowga gacanta ama xitaa magdhow toos ah, waxay ka baaraandegi kartaa qaybo leh saxnaanta cabbirka sare. Mararka qaarkood, waxaad isticmaali kartaa baabuur halkii aad shiidi lahayd. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah dhaqdhaqaaqa qalabka ee leexashada CNC waxaa lagu gartaa isdhexgalka saxda ah ee saxda ah iyo wadista servo, oo ay weheliso adkeynta qalabka mashiinka iyo saxnaanta wax soo saarka sare, waxay ka baaraandegi kartaa qaybaha shuruudaha sare ee toosnaanta, wareega, iyo cylindricity. ee generatrix.
(2) Qaybaha wareega oo leh qallafsanaan dusha sare leh
Lathes CNC waxay ku mashiin karaan qaybo yar yar oo dusha sare ah, ma aha oo kaliya sababtoo ah qallafsanaanta iyo saxnaanta wax soo saarka sare ee qalabka mashiinka, laakiin sidoo kale sababtoo ah shaqada goynta xawaaraha tooska ah ee joogtada ah. Haddii ay dhacdo in maaddada, qadarka rogid fiican iyo qalabka la go'aamiyay, qallafsanaanta dusha sare waxay ku xiran tahay xawaaraha quudinta iyo xawaaraha goynta. Isticmaalka shaqada goynta xawaaraha tooska ah ee joogtada ah ee xargaha CNC, waxaad dooran kartaa xawaaraha tooska ah ee ugu fiican si aad u gooyso wejiga dhamaadka, si qallafsanaanta gooyay ay u yar tahay oo joogto ah. Lathes CNC waxay sidoo kale ku habboon yihiin inay leexiyaan qaybo leh shuruudo qallafsan oo dusha sare ah. Qaybaha leh qallafsanaan yar ayaa lagu gaari karaa iyadoo la dhimayo xawaaraha quudinta, taas oo aan suurtagal ahayn suuf dhaqameed.
(3) Qaybo leh qaabab isku dhafan
Lathe CNC wuxuu leeyahay shaqada isdhexgalka arc, marka waxaad si toos ah u isticmaali kartaa amarka gunta si aad u socodsiiso contour-ka. Lathes CNC waxay sidoo kale farsamayn karaan qaybo rogaal celis ah oo ka kooban qaloocyada diyaaradda. Waxay habayn kartaa qaloocyada lagu sifeeyay isla'egta iyo sidoo kale qalooca liiska. Haddii la rogo qaybaha cylindrical iyo qaybaha kooniska ah waxay isticmaali karaan lathe-dhaqameedka ama xargaha CNC, ka dib u rogida qaybaha isku dhafan ee isku dhafan waxay isticmaali karaan kaliya xargaha CNC.
(4) Qaybo leh qaar ka mid ah noocyada dunta gaarka ah
Xadhkaha lagu gooyo xargaha dhaqameedku aad bay u xaddidan yihiin. Waxa kaliya oo ay u habayn kartaa xadhkaha mitirka iyo inch ee toosan ee dhagxaanta leh, iyo lathe-ku waxa ay ku kooban tahay oo kaliya in lagu farsameeyo dhawr gadood. Lathe CNC ma farsamayn karo oo keliya mid kasta oo toosan, duuban, metric, inch iyo dunta wejiga u dambeeya oo leh garoon siman, laakiin sidoo kale waxay farsamayn kartaa dunta u baahan kala-guur fudud oo u dhexeeya jaangooyooyin siman iyo doorsoomayaal. Marka laysarka CNC uu farsameynayo dunta, wareegtada dunta looma baahna in beddelkeeda loo beddelo sida suufka caadiga ah. Waxay wareegtaa midba midka kale ka dib iyada oo aan joogsan ilaa la dhammeeyo, sidaas darteed waxay leedahay waxtar sare leh oo ay u rogaan dunta. Lathe CNC waxa kale oo lagu qalabeeyaa shaqo goynta dunta saxda ah, marka lagu daro isticmaalka guud ee gashanaya carbide sibidhka, iyo xawaaraha sare waa la isticmaali karaa, sidaas darteed dunta rogan waxay leeyihiin saxnaanta sare iyo qallafsanaanta dusha hoose. Waxaa la dhihi karaa qaybaha dunta leh oo ay ku jiraan boolaladaha rasaasta ay aad ugu habboon yihiin in lagu farsameeyo xargaha CNC.
(5) Saxnaanta aadka u saxan, qaybo aadka u hooseeya ee dusha sare
Disks, madax-fiidyowyada, muraayadaha polyhedral ee daabacayaasha laysarka, durbaannada wareega ee sawir-qaadayaasha, muraayadaha iyo caaryada qalabka indhaha sida kamaradaha, iyo muraayadaha indhaha waxay u baahan yihiin saxsanaan heer sare ah iyo qiyamka qalafsanaanta dusha sare ee aadka u hooseeya. Way ku habboon yihiin Waxaa lagu farsameeyaa saxan sare oo shaqeynaya oo CNC ah. Muraayadaha loogu talagalay astigmatism balaastikada ah, oo ay adkeyd in la farsameeyo waagii hore, ayaa sidoo kale hadda lagu farsamayn karaa weelka CNC. Saxnaanta sagxadda sare ee dhammaystirka waxay gaari kartaa 0.1μm, qallafsanaanta dusha sare waxay gaari kartaa 0.02μm. Walxaha rogrogmada aadka u dhammaatay waxay ahaan jireen bir, laakiin hadda waxay ku fidday balaastiig iyo ceramics.
Waa maxay astaamaha rogidashada CNC?
1. In habka of processing CNC lathe, workpiece wareegtaa agagaarka dhidibka go'an, kaas oo si fiican u xaqiijin kara coaxiality u dhexeeya sagxadaha processing iyo saxnaanta dusha processing kasta.
2. Habka makiinada ee leexinta CNC waa mid joogto ah. Laakiin haddii dusha sare ee workpiece uu u muuqdo mid joogsanaya markaas Vibration ayaa dhacaya.
3. Qalabka lagu farsameeyo qaybo farsamo oo sax ah ayaa leh qallafsanaan hooseeya iyo caag wanaagsan. Way adag tahay in la helo meel siman oo leh hababka kale ee mashiinada, laakiin way fududahay in la gaadho meel siman oo la isticmaalayo lathe CNC si loo dhamaystiro.
4. Joornaalka loo isticmaalo CNC Turning waa kan ugu fudud dhammaan hababka farsamaynta farsamada. Waa mid aad u fudud oo ku habboon haddii ay tahay wax-soo-saarka, fiiqidda ama rakibidda, waxayna si fiican u buuxin kartaa shuruudaha processing ee workpiece.
Ka-hortagga lathe CNC waxay leedahay astaamo u gaar ah oo ka duwan farsamaynta farsamada kale, sidaa darteed waxay ku qabsan kartaa meel habab badan oo farsamaynta farsamada caadiga ah.
Ku soo dhawoow u soo dir sawiradaada xigasho, QY Precision waa lamaanahaaga ugu fiican.
Hore: CNC Milling
Xiga: Socodka gaarka ah
Cnc la rogay
Cnc Qaybta leexashada